GAYAAN: mid ka mid ah haldoorka heesaha soomaaliyeed | DAL-JIRE
GAYAAN: mid ka mid ah haldoorka heesaha soomaaliyeed
Gayaan, waa mid ka mid ah heesaha foolaadka u ah fanka casriga ah ee somalida, waa abbaartii dabayaaqadii qarnagii labaatanaad, wakhti calanka fanka iyo masraxubu cirkaa ku shareernaa, soomaalidu u qabeen hammuun aan kala go’ lahayn.
Waxay maskaxdiisa ka soo maaxatay dhidib ka mid ah dhidabadii fankaasi irkanaa, waa erayadii abwaan Xasan X. Cabdilaahi oo badi loo yaqaan Xasan Ganey. Waxa kale oo cododkooda tolmoon ku daran-dooriya xiddigo aan kala dhacin, cododkooduna somalida dhexdooda uga caan baxday sida magacyadooda oo kale. Waa Khadra Daahir Cige iyo Axmed Cali Cigaal.
Waa heesaha dabacsan mawduucooduna ku socdo jacaylka, waa garnaqsi gabadhadeed iyo garawshiinyo la’aanta inan rag. Taasi waa saabsanaha guud ee heesta, waxse aanay dhiggeed kula sinnayn cabbirka abwaanka, erayada iyo tusaalayaasha uu dhexroorka taas uga dhigay. Wuxuu adeegsanayaa bilayaal ka mid ah wacaasha hiddahii hore.
Ta hore waa soomaalida iyo ilaalinta deegaanta dhulka, sidii ay u dhowri jiray dhiroonka jaadad ka mid ah, kuwaas oo manafaco badnaa, waxaa reebban ka ahayd goyntooda iyo gargaraacistooda, waxay ahayeen biri-ma-gaydo, Si walba hadday kuugu gaqabato aanay kuu furnayn jid aad u gammuurtaa. Taas ayay gabadha garnaqsanaysaa isku massaynaysaa si ay u soo dhawaysatto fikirka dhanka kale.
Baydka labaad, abwaanku waxa uu sawirrayaa heerka ugu sarraysa ee gashiga Ilaahay, xilli daruurtu curatay, oo intay godlatay haddana hoortay, gal iyo godanba biyo ku jiifsadeen, haddana inay jiraan dhul gawaan ah oon mid geed ah soo bixin. Sarbeeb duluc shishe leh ayuu halkan gabanku ugu kordhinayaa gabadhii ay haasaawaha wadaagayeen.
Rogaal labaad ayay gabadhu soo celinaysaa, hogatuskii hore mid ka dubaalad dheer ayay kolkani soo daliilinaysaa. Abwaanku waxa uu baydkan ku soo qaadanayaa mid ka mid dhaqankii somalida xooladhaqatada ah lagu majiiran jiray, gobanimo soorka martida iyo somalidii jirtay heer ay ka gaadhay ayuu tibaaxayaa, wacaal la mid ha sheekadii “ceeb ama caydh” ee dugsiyada sare lagu baran jiray ayuu inoo soo warinayaa.
Ammin marti aan loo sii toog hayni gab soo tidhi, adi oo anfaco gows la saaro meelna ku ogayn, sad iyo kayd kale ood quudhaana jirin, gacmo madhan ah, badhaha uga taagan dawgii ay kula baydhayeen gobanimada iyo gunnamadu, guddoonka aad riddaana labadaa jid mid kugu darayo, waxay soomaaligaas kaga ururtay inuu hayinkii reerku raranayay, kolna loo dhaaminayay ceeb iskaga furdaansho. Caydhnimona gibilka u ritto.
Dhadhanka ay samaynayso heestu, waxa ka culus dhanbaalada aya xanbaarsantahay. tusaalayaasha dhaqanka eey da’aada yaryar u gudbinaysaa waa mid macnaha fanka iyo abwaanimadaba buuxinaya. Amar iyo xaasilna erayada heesta Gayaan waa kuwan soo socda.
Goor gaaban adigoo
Guri waayay laga baxay,
Iyo oodaad gurataba
Gabbalkiina kuu dhacay.
Dhirtaba geed aan la jarin
Iyo ogoow lama garaacaan
Gu’i waaye inuu jiro,
Gar Allee dadkuna taas
Waa sida gaddaasoo
Mar hadaynu nahay gacal
Marna ahay gayaankaa
Gaar ahaana caashaqu
Guudkaaga igu furay
Isii gacan walalnimo”.
Gu’ barwaaqo oo da’ay
Iyo diriraan gaagixin
Dhulkaba meel gawaanoo
Ogoow geedo soo bixin
Gu’i waaye inuu jiro.
Gasariira ha noqonine
Mar inaynu nahay gacal
Marna tahay gayaankay
Kuse guurasan maaye
Taa saar niyada gali.”
“Marti goorxun socotaba
Gurigaaga oo madhan
Iyo gaabanoow adhi
Dadkaba gobol aan la qadin iyo
Loo gawracaa jira.
Ha gafine ujeedadu
Waa sida gaddaydoo
Cagalee ha gaynine
Haddii ay i gaaadheen
Gacanbaan ku siin laa,
Ogoow gaadmo iyo orad
Midna laguma gaadhee.
Gasariira ha noqonini
W/Q: Dhamme Maxmoud Axmed.
This entry was posted on December 23, 2011, in Hoyga, Qormooyinka, Suugaan. Bookmark the permalink.	1 Comment
← GEESI BOQRA; sheeko gaaban
DHALLINYAHAY HABRASHADA MA DHAAFNAA? →
One thought on “GAYAAN: mid ka mid ah haldoorka heesaha soomaaliyeed”
aad ayay u heersaraysaa runtii, waad mahadsantahay dhamme inaad noosoo gusbiso,